“ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်သည် ကျွန်ုပ်၏အမှတ်သင်္ကတ အလံတော်ဖြစ်သည်..” ဟု ခံယူခဲ့သူ တဦးအကြောင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုဂျေ ● တိုက်ပွဲပျော် ဟာသစာရေးဆရာကြီး အီကြာကွေး - အပိုင်း (၂)
၀၆ ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၊ ၂၀၁၃
ခင်ဝမ်း (၁၉၄၇-၂၀၀၀) နှင့် ဟယ်ရီလင်း (၁၉၆၂-၂၀၁၃) ကို မင်းမင်းလတ် ၏ ဈာပန (၁၉၉၇) ၌ တွေ့ရစဉ်၊ ဓာတ်ပုံ မျှဝေသူ – သုခမိန်လှိုင် (ကဗျာဆရာ/တေးရေးဆရာ)
ငယ်ငယ်က နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင် ကွင်းထဲမှာ ဆံပင်ရှည်တလွှားလွှားနဲ့ အားကြိုးမာန်တက် တကွင်းလုံးအနှံ့ ပြေးလွှားကစားတတ်တဲ့ အမေရိကန် အနောက်ပိုင်း သေနတ်ပစ်ကားတွေထဲက “Red Indian” ရုပ်နဲ့ တောင်အမေရိကသားကြီး တိုက်စစ်မှုး ဇာမိုရာနို ကို အားပေးခဲ့တယ်။ ဇာမိုရာနိုဟာ ဘောလုံးကစားရာမှာ စိတ်ဓာတ်ကောင်းရုံတင်မကဘဲ သူ အမြဲဝတ်ဆင် တန်ဖိုးထားတဲ့ ကျောနံပါတ် (၉) ကို သူ့နောက်မှ အသင်းကို ရောက်လာတဲ့ လူငယ်ခြေတက် တိုက်စစ်မှုး အတွဲကို ပေးဝတ်၊ သူကတော့ သူ့ဂျာစီအင်္ကျီကျောမှာ (၁+၈) လို့သာ စိတ်အာသာပြေ ရေးထိုးဝတ်ခဲ့ပြီး ကျေနပ်နိုင်လောက်အောင် စိတ်သဘောထားကြီး ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားလည်း ဖြစ်တဲ့ အဲဒီ သူရဲ့ တွဲဖက် တိုက်စစ်မှုး ကို နိုင်ငံအသင်းချင်းပြိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်အမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ မှာ ပြိုင်ဘက် အနေနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီး သူ့အသင်း ရှုံးနိမ့်သွားတော့ ဆက်လက်အောင်မြင် ဖလားဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းရှည်ကြီး တောင်းပေးနိုင် လောက်အောင်လည်း မနာလို၊ ဝန်တိုစိတ်ကင်း သဘောထား ဖြူစင်ခဲ့တယ်။
အလားတူပဲ ငယ်စဉ်က ကျနော့်ရဲ့ ဗမာပြည် နိုင်ငံခြားသံစဉ်မှီး အပြင်းစား ရော့ခ်ဂီတ စင်မြင့်မှာလည်း ကြေးနီရောင်အသားအရေ၊ နှာတံမြင့်မြင့် ပေါ်ပေါ်၊ လူနီရိုင်း အသွင်သဏ္ဍာန် မျက်နှာ၊ ဆံပင်ရှည်တလွှားလွှားနဲ့ ရော့ခ်သီချင်း အပြင်းစားတွေကို အားပါတရ စင်မြင့်တလျှောက် ပြေးလွှား ခုန်ပေါက် အော်ဟစ်၊ ဟစ်ကြွေးတတ်တဲ့ အညာသား ရော့ခ်ကာကြီး တယောက်ကို အားပေးခဲ့ဖူးတယ်။
သူဟာ ကျနော့်အတွက် နိုင်ငံခြားသံစဉ်မှီး အပြင်းစား ဗမာ ရော့ခ်ဂီတ ရဲ့ တဦးတည်းသော ရော့ခ်ဧကရာဇ်ကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူဟာ ကျနော့်အတွက် ဗမာပြည် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ရော့ခ်ဂီတ ကို ရှေးဦးလမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့ ဆလိုင်းသွှအောင် နဲ့ ဂျေမောင်မောင် ပြီးရင် တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုရဆုံး အဆိုတော် ဗမာ ရော့ခ်ကာကြီးလည်း ဖြစ်တယ်။
သူဟာ ကျနော်နဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းတူ တခေတ်တည်းကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တချို့ရဲ့ နှလုံးသားရင်ခွင်နန်းတော် ကို ရော့ခ်ဂီတနဲ့ နန်းစိုက်သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။
သူဟာ သူရဲ့ အောင်မြင်ချိန်တွေမှာ စည်းစိမ် အပြုတ်ခံပြီးတော့ကို ရော့ခ်ဝါသနာရှင် လူငယ်တွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးတတ်တဲ့ စေတနာရှင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။
သူဟာ သူဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ နောက်ပေါက်တွေ အောင်မြင်မှုရ၊ သူ့ကို ကျော်သွားနိုင်တာကိုလည်း မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကင်း ကျေနပ်နေနိုင်တဲ့ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝသူလည်း ဖြစ်တယ်။
သူဟာ အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ငွေရှာလို့ ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို လျစ်လျူရှုနိုင်ခဲ့တဲ့ အလိုလောဘနည်းတဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
သူဟာ မအောင်မြင်ခင်၊ အောင်မြင်နေတဲ့အချိန် နဲ့ ကျချိန် ကာလသုံးပါးလုံးမှာ မပြောင်းမလဲ တသမတ်တည်း သဘောထားနိုင်တဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
ကျချိန်တွေရဲ့ သူ့သီချင်းတချို့မှာ နာကြည်းသံတွေ ထင်ဟပ်နေပေမယ့် သူဟာ ဘဝမှာ အရိုးသားဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစား နေထိုင်သွားတဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
သူဟာ ဘဝကို ဂျစ်စပီ တယောက်လို ထင်သလိုနေထိုင် ပျော်ပျော်ပါးပါး မိုက်မိုက်မဲမဲ ပေပေတေတေ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
သူဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ အခြေခံလူတန်းစား အမှတ်တံဆိပ် ဘီအီး အရက်ကို မောင်ချောနွယ်လို ယဉ်ကျေးမှုမြှင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သောက်တတ်သူလည်း ဖြစ်တယ်။
သူဟာ “ကျွန်ုပ်၏ ဆံပင် သည် ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်သင်္ကတ အလံတော် ဖြစ်သည်..” လို့ တစိုက်မတ်မတ် ခံယူထားခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
ဆံပင်ရှည်ထားခြင်းဟာ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာ တခုပါ။ လွတ်လပ်လိုစိတ်ကို ပုံဖော်မှုပါ။ ချုပ်နှောင်မှုကို တန်ပြန်မှုပါ။ ဖိနှပ်မှုကို အာခံမှုမှာပါ။ မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်မှုပါ။
ဆံပင်ရှည်ထားခြင်းဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် လူငယ်ဆိုတဲ့ မျိုးဆက်ကွာပေမယ့်၊ အတွေးအခေါ်၊ ခံယူချက်၊ သဘောတရား မကွာ..၊ မပြောင်းလဲတဲ့ လူတန်းစားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကတပါ။
ဗမာပြည်က ရောခ့်ဘုရားတွေ အားလုံးနီးပါး တရားဝင် စင်မြင့် ဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့ ခေါင်းက ဆံပင် လဲရတဲ့ အချိန်ကာလ တခုမှာတောင် သူဟာ သူ့ရဲ အမှတ်သင်္ကတ၊ လူငယ်ထု ကိုယ်စားပြု ပြယုဂ်၊ ရော့ခ်ဂီတ ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ဆံပင်ရှည် ကို မဖြတ်ခဲ့တဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ အတန်းပိုင်ဆရာမ က အတန်းနောက် ဆွဲခေါ် ကတ်ကြေးနဲ့ ဆံပင်အတင်းညှပ်ပေးမှ ဆံပင်ညှပ်ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်အတွက်..၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ ဖိနှိပ်မှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်းကို ဆံပင်ရှည် ထားခြင်းဆိုတဲ့ ရုပ်သဘော နဲ့ ဖော်ပြ စံပေတံ တိုင်းတတ်တဲ့ ကျနော့်အတွက် ထမင်းအိုးအကွဲခံ ဆံပင်ရှည်ထားနိုင်တဲ့ သူဟာ သူရဲကောင်းကြီးပါ။
အလားတူပဲ.. ရေပေါ်ဆီ လူ့မလိုင်အသိုင်းအဝန်းရဲ့ ဧည့်ခန်းဆောင် တိပ်ရကော်ဒါ ဓာတ်စက် နဲ့ ပွတ်သဘင် ပွဲတွေက ဖေတော့မောင်တော့ စာသား၊ အရူးချီးပန်း ဂီတ အဆင့်ကနေ အနောက်က ရော့ခ်ဘုရား ဘော့ဒိုင်လန် စတင် လမ်းဖောက် တပ်ဆင်ပေးလိုက်လို့ လေးနက်တဲ့ အတွေးအခေါ် စာသား၊ သံစဉ်တွေပါတဲ့၊ လူမှုတရားမျှတမှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊ ပြည်သူ့အခွင့်အရေး ကို တောင်းဆိုတဲ့၊ အဖိနှိပ်ခံ လူတန်းစား ဘက်က ရပ်တည်တဲ့၊ မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့၊ လူ့သိက္ခာ ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ လောကပါလ တရားလက်ကိုင် အခြေခံလူထု ကိုယ်စားပြု ဂီတ အမျိုးအစား ဖြစ်လာတဲ့ ရော့ခ်ဂီတဟာလည်း ကျနော့်အတွက် တန်ဖိုးထားစရာ လူမှု၊ဘဝ၊အတွေးအခါ် စံနှုန်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဆိုတော့ ဗမာပြည် အတိုင်းအတာ နဲ့ ရောခ့် ဂီတကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ သူဟာလည်း ကျနော့်အတွက် သူရဲကောင်းကြီး ဖြစ်ပြန်တာပေ့ါ..။
ဟယ်ရီလင်း (၁၉၆၂-၂၀၁၃) ၊ ဓာတ်ပုံမျှဝေသူ DoneyMP
ငယ်ငယ်တုန်းက ‘ဂ’ ငယ်၊ ကြီးတော့ ‘ဃ’ ကြီး ဖြစ်သွားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
မီးရောင်စုံ ဆလိုက်ထိုးထားတဲ့ စင်မြင့်ထက်မှာ မားမားကြီးရပ်.. ဆံပင်တွေ ဝဲချ၊ မိုက်ခွက် ကို အားမန်ပါပါနဲ့ ကိုင်ပြီး “စောင့်နေအချစ်ရေ.. ဟင်း.. ဟင်း.. တကယ်.. ရောက်လာမယ်..” လို့ စလိုက်ရင်ပဲ အောက်က လူငယ်ပရိသတ်ကို နဂါးငွေ့တန်းထဲ စွဲယူသလို ညှို့ယူသွားနိုင်စွမ်းရှိခဲ့သူ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
အနိမ့်အမြင့်၊ အတက်အကျတွေ အပြည့်နဲ့ ဂီတ ဘဝ လမ်းကြမ်းကို ရူးရူးသွပ်သွပ် ခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
မထွက်ဖြစ်တဲ့ တေးစုတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
သူ.. ကံဇာတာ နည်းပုံများ ဂန္တဝင် မှတ်တိုင် စိုက်ထူရမယ့် အခွေက ဦးနှောက်မရှိဘဲ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် အဓမ္မ မင်းတက်လုပ်ခဲ့တဲ့ အရူးတွေရဲ့ ရမ်းကားတဲ့ လုပ်ရပ် ငွေစက္ကူသိမ်းလို့ ပရိသတ်ရှေ့ ချမပြလိုက်ရရှာတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
သူ့ရဲ့ နောက်ပိုင်း စန်းဇာတာကျ.. ပေါ်ပြူလာမဖြစ်.. လူကြိုက်မများပုံများ.. သူ့သီချင်းရုပ်သံလုပ်ဖို့တောင် ပုံလေးကောင်းကောင်း တပုံ အွန်လိုင်းမှာ သူမသေခင် ကျနော် ရှာမရခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
နာမည်လည်းဖျင်း အဆီအသားလည်းဖျင်းတဲ့ “ငဖျင်း” တွေ လူကြိုက်များ ထင်ပေါ်တဲ့ခေတ်မှာ အရသာလည်းရှိ ကိုယ်ထည်လည်းပြည့်တဲ့ ရေချိုငါးသလောက်ကြီး.. လူကြိုက်နည်းတဲ့ကောင်ကြီး.. ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
လူကြိုက်သာမများတာ ရှိုးပွဲတွေမှာ “ငါရိုးမသားတွေ” လို့ သူ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ဆဲရင် ချဲဂဏန်း အတိတ်စိမ်း ဘိုးတော် ပေးသလို ကျေကျေနပ်နပ်ခံယူတတ်တဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေ အပြည့်နဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
လူတကာ ငန်းငန်းတက်တဲ့ ငွေကြေး ကို အဆိပ်လို သဘောထား တလွဲဆံပင်ကောင်းခဲ့တဲ့ လူမိုက်ကြီး ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
အချစ်ရယ်.. ပေါင်မုန့်တလုံးရယ်.. နဲ့ ဘဝကို နေတတ်.. ကျေနပ်နေနိုင်ခဲ့တဲ့.. ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
မိသားစု ထမင်းဖိုးအတွက် တတပ်တအားဖြစ်အောင် အငှားယာဉ်တောင် မောင်းခဲ့ရတယ်လို့ စိတ်မကောင်းခြင်း ကြီးစွား ကြားသိခဲ့ရတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
မင်းမင်းလတ်ကြီး က အရက်ခွက်ချင်းတိုက် မင်းသိပ်မမိုက်နဲ့လို့ ဆုံးမခဲ့ရတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
သူထက် တခေတ်စောတဲ့ ဟန်တင်၊ ဂျေမောင်မောင်၊ ဂျယ်ရီ၊ ဘိုတောက် စတဲ့ မန္တလေး ရဲ့ လမ်းသူရဲ တွေကို မျက်ဝါးဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ အားကျခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း ဘောင်းဘီဖင်ကျပ်၊ ဆံပင်ရှည်၊ ဂစ်တာ တဒေါင်.. ဒေါင်.. တဒင်.. ဒင် နဲ့ လူငယ်ဘဝမှာ ဂီတဘဝ စခဲ့သူ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
ရော့ခ်သီချင်းတွေကို အညာလေ၊ ရှေးဇာတ်မင်းသားလေ နဲ့ ဆိုတတ်သူလို့ ဆရာ သုခမိန်လှိုင်က မှတ်ချက်ပြုတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ မန္တလေးသား ကိုဃကြီးပါ။
မြန်မာသီချင်း အေးအေးကြီးတွေကိုလည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ ဆိုတတ်တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
ငယ်စဉ်ကဆို “ဆင်မိုက်ကြီးခမျာ.. ဒူးတုပ်ရရှာ..” ဆိုတဲ့ “အောင်ခြင်းရှစ်ပါး” လည်း မကျန်အောင် ဆိုခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
မန္တလေး သင်္ကတ မြို့မတီးဝိုင်းကြီးမှာ ရှေ့ထွက်အဆိုတော် အနေနဲ့လည်း ခေတ်ပေါ်သီချင်းတွေ သီဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
မန္တလေး ဧဒင်တေးဂီတအဖွဲ့ က မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
“မီးသင့်မြေမှ အငွေ့အသက်များ” ကို လူထု စောစီးစွာ ရှုရှိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အထမမြောက်ခဲ့တဲ့..၊ “စကြ၀ဠာမီးပြတိုက်များ” အိမ်မက်ကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
ဗမာ့ရောခ့်ဂီတ ကို တခန်းတကဏ္ဍ၊ တထောင့်တနေရာ ထက်ပိုတဲ့ နေရာကနေ အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုဃကြီးပါ။
ဂမ္ဘီရမှော်ဆန်ဆန် အသံအားနဲ့ ရော့ခ်သီချင်းတွေ ဆိုဖို့ ကမ္ဘာမြေကို ဆင်းသက်လာတဲ့ ဂြိုဟ်သားကြီး တယောက် ဘဝရဲ့ လက်တွေ့ ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ကျောင်းသားသစ် တယောက်လို ရိုးအအ ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တော့ လောကကြီးရဲ့ လှည့်ကွက်တွေမှာ အဖြေမှန်ရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ဘဲ.. ခုတော့.. သူ.. “ငါလေမောတယ်” လို့ အော်ရင်း ထာဝရအနားယူဖို့ ကမ္ဘာမြေကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ..။
ကြေကွဲရပါတယ်.. ကိုဃကြီးရေ..။ ကျနော့် ရဲ့ ရော့ခ်သူရဲကောင်းကြီးရေ..။
“ငါရိုးမသားတွေ” လို့ အာလုပ်သံကြီးနဲ့ ချစ်စနိုးဆဲ လာနှုတ်ဆက်လှည့်ပါအုံး.. ကိုဃကြီးရေ..။ ကျနော့် ရဲ့ ရော့ခ်သူရဲကောင်းကြီးရေ..။
ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘဝ ရောက်ပါစေ ကိုဃကြီးရေ..။ ကျနော့် ရဲ့ ရော့ခ်သူရဲကောင်းကြီးရေ..။
သံသရာမှာ ပြန်ဆုံခွင့်ရရင် ကိုဃကြီး သီချင်းဆိုပြတာ.. ဆံပင်ရှည်တွေဝဲချပြတာ.. နားထောင်ချင်၊ ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်.. ကိုဃကြီးရေ..။ ကျနော့် ရဲ့ ရော့ခ်သူရဲကောင်းကြီးရေ..။
ခုတော့.. နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်.. ကိုဃကြီးရေ..။ ကျနော့် ရဲ့ ရော့ခ်သူရဲကောင်းကြီးရေ..။
သူ့ရဲ့ ဘဝ၊ ဂီတ အကျဉ်း
အမည်ရင်း – ထွန်းမြင့်ဦး
ဂီတဘဝ အမည် – ဟယ်ရီလင်း
ငယ်နာမည် – အာဂ ၊ ‘ဂ’ (ဂငယ်) နှင့် နောင် ‘ဃ’ (ဃကြီး)
မွေးသင်္ကရာဇ် – ၀၇၊ ဇူလိုင်၊ ၁၉၆၂
ဇာတိ – မန္တလေး
ပထမဆုံးအသံသွင်းယူသည့် တေးစု – မီးသင့်မြေမှ အငွေ့အသက်များ (၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင် ခန့်) (အမျိုးသမီး အဆိုတော် သူငယ်ချင်း သီတာ နဲ့ တွဲလျက်)၊
ပထမဆုံးအသံသွင်းယူသည့် တကိုယ်တော် တေးစု – ကြိုက်သလိုနေနိုင်တယ် (၁၉၈၆)၊
ပထမဆုံး ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့သည့် တကိုယ်တော် တေးစု – မိုးကြိုးသွားရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အလျင် (သို့မဟုတ်) ဟယ်ရီလင်းရဲ့ဟယ်ရီလင်း (၁၉၉၂)၊
နောက်ဆုံး ထွက်ခဲ့သည့် တကိုယ်တော် တေးစု – နောက်လူမြည်းရင် ချိုပါစေ (မင်းမင်းလတ် သီချင်းများ ပြန်လည် ခံစား သီဆိုမှု) (၂၀၀၀ ခုနှစ်များ)၊
အခြား တကိုယ်တော် တေးစုများ – ဂြိုလ်သားတယောက် ၊ ကျောက်ခေတ်၏နောက်ဆုံးနေ့ ၊ အနာဂါတ် ဗိမာန် ၊ တန်ဖိုးများနှင့်ပေးဆပ်ခြင်း၊
နှစ်ယောက်တွဲ တေးစုများ – ပန်းနုရောင်လက်ထပ်ပွဲ (ဖိုးကျော် နှင့်တွဲ) ၊ မုန်တိုင်းတမန်များ (ရဲသွင် နှင့်တွဲ)
မထွက်ဖြစ်ခဲ့သည့် တေးစုနာမည် တချို့ကျန်ရှိနိုင်၊
၀၅၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၃ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ (၄) နာရီခန့် တွင် အထွေအထွေ ရောဂါဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်လမ်းရှိ နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်၊
၀၇၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၃ ရန်ကုန်မြို့ ရေဝေး သုသာန်၌ မီးသဂြိုဟ်ရန် စီစဉ်ထား။
(အချက်အလက် အမှားအယွင်း/အလို ရှိပါက ပြင်ပေးပါရန်။)
(အိမ်မက်မီးရထားကြီး ၊ သူ၏ မထွက်ဖြစ်ခဲ့သည့် တကိုယ်တော် ပထမ တေးစု ၊ ၁၉၈၆)
(အဆိပ်ငွေကြေး ၊ သူ၏ ပထမဆုံး ထွက်ရှိ အောင်မြင်ခဲ့သည့် တေးစု ၊ ၁၉၉၂)
(စောဘွဲ့မှူး ကွယ်လွန်ခြင်း အမှတ်တရ အတွက် သူ သီဆိုပေးခဲ့သည့် နာမည်ကျော် “ရွှေပေါက်တူး” ၊ ၁၉၉၈)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ, ငြိမ်းချမ်းအေး
3 Responses to “ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်သည် ကျွန်ုပ်၏အမှတ်သင်္ကတ အလံတော်ဖြစ်သည်..” ဟု ခံယူခဲ့သူ တဦးအကြောင်း
NYEIN CHAN AYE on February 7, 2013 at 8:48 am
အခြားတေးစုစာရင်းတွင် “ဆဋ္ဌကမ္ဘာ (၁၉၉၆)” ထည့်ရန်ကျန်ခဲ့သည်။ ပထမထွက်ဖြစ်တဲ့တေးစု ခုနှစ် ကက်ဆက်တိတ်ခွေ ခွင့်ပြုချက် ခုနှစ်က (၁၉၉၁) ဖြစ်သည်။ ပရိသတ် လက်ထဲရောက် အောင်မြင်ခဲ့သည် ခုနှစ် ၁၉၉၂ ကို စိတ်ထဲစွဲနေ၍ ၁၉၉၂ ဟု ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
NYEIN CHAN AYE on February 7, 2013 at 2:04 pm
မှတ်ချက် – “ဆဋ္ဌကမ္ဘာ (၁၉၉၆)” က အုပ်စုအတွဲတေးစု ဖြစ်ပါသည်။
Anonymus on February 7, 2013 at 9:03 am
Thanks much ! No other notes will complete as your notes. Thanks much.